Amahedisethi: Isidlali somculo sisakazwa sisuka ku-YouTube nakuReddit | Kusuka kuLinux
Umkhuba we ukusetshenziswa kokuqukethwe ngefomethi yokusakaza minyaka yonke kuya ngokuya kwanda, futhi manje nemiphumela yokuhlukaniswa nokuqedwa kwezenhlalo ngu Ubhubhane lwe-covid-19, futhi na ngaphezulu.
Futhi emkhakheni wokudla umculo online, YouTube, kungabhekwa njenge- umtapo wolwazi womculo ongenamkhawulo. Kungakho, izinhlelo zokusebenza eziningi (abadlali) zenziwa online noma kudeskithophu ukuze zisetshenziswe okuqukethwe komculo online, njenge «Amahedisethi».
Emkhakheni wezomculo ngu isakazwa nge-YouTube ikakhulukazi, «Amahedisethi» ivelela njengokukhanya, okulula nokusebenza isidlali somculo ngokusakazwa, umthombo ovulekile ne-multiplatform, esivumela, phakathi kwezinto eziningi, ukweqa ukuphazamiseka kokukhangisa kokuqukethwe okulalelwe.
Kodwa-ke, ngaphambi kokuntywila «Amahedisethi» Kuhle ukuphawula ukuthi, kwezinye izikhathi, sikhulume ngokunye abadlali bomculo abafanayo, okungukuthi, umthombo wokuqukethwe okuku-inthanethi ngokusakazwa, njenge "Inuzi", esichaza kafushane ngethuba labo ngokulandelayo:
"INuclear isidlali somculo esisakazwayo esithuthukiswe ku-GitHub ngaphansi kwelayisensi ye- "Affero GPL", nangaphansi kwefilosofi yentuthuko eyaziwa ngokuthi "i-GNU / Linux Okokuqala", okusho ukuthi uhlelo lokusebenza lolo luhlonipha inkululeko yethu, lusinika ukufinyelela okugcwele kwikhodi yomthombo , ukuze sikwazi ukuyiguqula futhi sinikele kuphrojekthi. Amagama asemthethweni wokudonswa wohlelo lokusebenza kwiwebhusayithi yawo esemthethweni afundeka ukuthi iNyukliya isidlali somculo sanamuhla esigxile ekusakazeni amafonti wamahhala." I-Nuclear: Isidlali somculo esisakazwa kahle kakhulu
Ezinye ezithakazelisayo yilezi:
1 Amahedsethi: Isidlali sedeskithophu seLinux
1.1 Yini ihedsethi?
1.2 Izici nokusebenza
1.3 Landa, ukufaka kanye nezithombe-skrini
Amahedsethi: Isidlali sedeskithophu seLinux
"Ihedsethi isidlali somculo sedeskithophu esinikwa amandla yi-YouTube neReddit."
Noma kunjalo, ku- iwebhusayithi ku-GitHub ichaze ngokugcwele kanjena:
"Ihedsethi isidlali somculo esilula seMac, Windows, neLinux ngokusesha okwakhelwe ngaphakathi ku-YouTube, isikrini sasekhaya esinohlu lokuthandwa ngabantu ngezinhlobo zezikhathi nangezikhathi, futhi okungcono kakhulu, umsakazo onikwe amandla yiReddit. Amahedisethi athatha izingoma ezabiwe ngaphezulu kwama-reddits omculo angaphezu kwama-80, azihlukanisa ngezigaba, futhi azidlale ngokuzenzekelayo. Kuyindlela epholile futhi eyingqayizivele yokuthola umculo omusha njengoba ukhethwa abanye abantu abanjengawe hhayi ngama-algorithms."
Kuyi-multiplatform: Itholakala ngeWindows, Linux (Debian, Redhat) kanye neMacOs. Ingakhiwa futhi kusuka kukhodi yomthombo endaweni yangokwezifiso.
Izindikimba ezibukwayo ezi-2 ziyatholakala: Inezindikimba ezibukwayo ezi-2: Ubumnyama nokuKhanya. Futhi kungekudala izofaka eyayo neyomuntu uqobo.
Ukuhlanganiswa ne-Last.fm: Ivumela ukuhlanganiswa ngokuchofoza okukodwa nensizakalo yomculo yomphakathi ethandwayo. Phequlula izingoma ezitholakalayo bese unikeza ithuba lokuhlela imininingwane.
Ukuxhumana kwangasese nokuphephile: Ithembisa ukuthi yonke idatha, imininingwane namakhukhi idluliselwa ngoxhumano oluphephile lwe-SSL, ukugcina yonke idatha ingabonakali kunethiwekhi.
Umthombo ovulekile: Ukuqinisekisa ukuphepha nokuzinza, ingxenye enkulu yomthombo wehedsethi igcinwa ivulekile.
Ukuvumelanisa kwamafu: Konke okuphethwe kusefwini, ngakho-ke ngokungena nje, wonke umculo ophethwe ubuyile. Ukuvumelanisa uhlelo lokusebenza ne-akhawunti yomsebenzisi we-YouTube, okulandelayo kufanele kulandelwe inqubo.
Landa, ukufaka kanye nezithombe-skrini
Uhlobo lwayo lwakamuva oluthi inombolo 3.3.0 nangemva kokulandwa, thina ku ifomethi ".deb", Futhi ifakiwe nge "Apt" noma "dpkg", «Amahedisethi» kubukeka kanjena:
Ngokwami ​​ngiyithande kakhulu, ngoba mina gwema ukulalela amakhefu ezikhangiso, kusuka kokuqukethwe hhayi komculo kuphela, kodwa kusuka kunoma yikuphi okuqukethwe kwe- YouTube, Ngokwesibonelo, Iziteshi ku-Free Software, Open Source ne-GNU / Linux engihlala ngibona. Futhi konke asikho isidingo sokungena ngemvume esicelweni, esidingeka kuphela uma othile efuna ukusebenzisa i- imenyu yokusetha nezinketho ukuxhumana y ukuthandwa.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «Headset», encane futhi ewusizo isidlali somculo okuqukethwe online kwe I-YouTube neReddit, umthombo ovulekile ne-multiplatform, esivumela phakathi kwezinto eziningi ukweqa ukuphazamiseka kokukhangisa; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Amahedisethi: Isidlali somculo sisakazwa sisuka ku-YouTube nakuReddit
Cishe kube ngu-17 ukuba sengozini nangasemuva kwatholakala kumadivayisi weFibreHome
I-Raspberry Pi Pico: i-SBC entsha eshibhile futhi eshibhile